Qaraxyo Darandoori Ah Oo Lala Beegsaday kaniisado Ku Yaal Kenya, Dhaawaca Iyo Dhimashada Oo Batay Iyo Booliska Oo Ka Hadlay | Araweelo News Network (Archive) -
Qaraxyo Darandoori Ah Oo Lala Beegsaday kaniisado Ku Yaal Kenya, Dhaawaca Iyo Dhimashada Oo Batay Iyo Booliska Oo Ka Hadlay
Naribi(ANN)Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay, in kabadan 40 qofna waxa soo gaadhay dhaawacyo kala duwan kadib markii maanta qaraxyo kala duwan lagu weeraray kaniisado
ku yaal Magaalada Gaarisa ee bariga dalka kenya.
Weerarka qaraxyada ah waxa ka horeeyay laba nin oo tacshiirado rasaas ah la beegsaday booliska ilaalinayay Kaniisadahaa, iyadoo weerarka qaraxyada ahi markaa ka dib dhacay sida ay sheegeen dad goob joog ahi.
Ismaaciil Garaad oo ah Maaryarka magaalada Gaarisa oo ku taal duleedka xadka Kenya iyo Somalia, ayaa weerarkaa oo dhacay maanta oo ah Axad ah ku tilmaamay mid bahalnimo ah, wuxuuna isagoo arrintaa ka hadlaya yidhi, “Markhaati ka noqonmayno in weeraro noocan oo kale ahi ay dalkayaga ka dhacaan, iyadoo si badheedh ah dadka loo tooganayo, waana ogaan doona dadka aan damiirka lahayn ee dadkayaga laynaya.
ma jirto cid ilaa hada sheegatay qaraxyadaa iyo weerarka ka dhacay Gaarisa oo ka mid ah Labada magaalo ee waaweyn magaalooyinka ku yaala xadka ay wadaagaan Kenya iyo Somalia, waxa u dhow xerada ugu weyn ee ugu dada weyn xeryaha qoxootiga aduunka, waxaana ku nool dad lagu qiyaaso 500, 000 (shan boqol oo kun) oo qoxooti Soomaali ah, waxaana todobaadkii lasoo dhaafay laga afduubay shaqaalle u shaqaynayay hay’addaha gargaarka ee ka hawlagala halkaa.
Sidoo kale weerar koox dablay ahi ka fuliyeen kaniisad ku taal Gaarisa December ina dhaaftay waxa ku dhintay laba qof.
Ciidamada Kenya ayaa galay Oct, 2011, gudaha Dalka Somalia ee dhinaca gobolada u dhow xadkeeda, waxaayn weeraro aan wax guulo ahi kasoo hoyn ku qaadeen deegaamada fadhiisimada u ahaa kooxda Al-shabaab, taas oo balanqaaday inay ka aargudanayaan Kenya oo ay qaraxyo ka samaynayaan.